Sandesh Prabhahबिज्ञप्तीको अर्थ खोज्दै सरकार : दुई वाक्यले नै फनफनी पार्‍यो ! Sandesh Prabhah
बिज्ञप्तीको अर्थ खोज्दै सरकार : दुई वाक्यले नै फनफनी पार्‍यो !
बि’द्रोही दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग सम्वाद र वार्ताका लागि सकारात्मक छौं’ भनेपछि अब सरकारतिर सबैको नजर गएको छ । सरकारले नेकपामाथिको प्र’तिबन्ध हटाएर वार्ता समिति गठन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो बढेको छ । अझ कति सम्म भने आजै नै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र वार्ता टोली घोषणा गर्ने सम्मको समाचार आइरहेका छन ।
सरकारका एक मन्त्रीले विप्लव नेकपालाइ वार्तामा ल्याउन अनौपचारिक प्रयास भइरहेको सुचना सार्वजनिक गरेकाछन । तर, चर्चा गरिएजस्तो आज भरे नै वार्ता भएर नेकपा शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आइहाल्नेमा उनले सरकार ढुक्क भएको देखिदैन । यद्यपि हिजो मात्रै उपत्यकामा नै नेकपाका केन्द्रिय सदस्य सहित अनौपचारिक वार्ता समेत भएको छ ।
सरकारका एक मन्त्रीले विप्लवको दुई वाक्यको विज्ञप्ति जारी गरेकै भरमा सरकारले तत्कालै प्र’तिबन्ध हटाउने र वार्ता समिति गठन गर्ने सम्भावना कम देख्छन् । यो बाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार विप्लवको बिज्ञप्तीको अर्थको खोज्न मै ब्यस्त रहेको छ । अझ भन्दा विप्लवको पछिल्लो बिज्ञप्तीले धेरैको दिमाग गुमाइरहेको छ । सरकारले विप्लवको बिज्ञप्तीको अध्ययन र अर्थ खोज्नमा केही समय खर्चिने संकेत देखिएको छ ।
महासचिव विप्लवको विज्ञप्तिको अर्थ
नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विप्लव नेतृत्व नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन तयार छन् । उनीसँग परामर्श गरेर नै विप्लव नेकपालाई वार्तामा ल्याउन आफूहरुले विभिन्न च्यानलबाट सम्वाद अगाडि बढाएको बिगत लामो समय देखी नै चल्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले नै विप्लव नेतृत्व नेकपाको शीर्ष स्तरबाट वार्ताप्रति धारणा खोजेपछि शनिबारको विज्ञप्ति आएको हो । ‘हामी त वार्ताका लागि तयार नै छौं, विप्लवको के हो ? भन्ने भएपछि विप्लवको विज्ञप्ति आएको हो,’ सरकारी स्रोत भन्छ, ‘यसले सम्वादको वातावरण बनाउन थप सहज हुदैछ ।’
फागुन ८ गते शनिबार महासचिव विप्लवद्वारा जारी छोटो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो क्रा’न्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग सम्वाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँछौं।’
विप्लव नेकपाको स्रोत अनुसार सरकारले संवादका क्रममा सरकारी पक्षले महासचिवकै आधिकारिक भनाइ खोजेकाले विप्लवको वक्तव्य आएको बताएकाछन ।
चर्चा जस्तै सहजै होला त सहमति
सरकार र विप्लव नेकपा दुबैले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको बताएका छन् । तर आजको केही भनाइहरु तुरुन्तै नै वार्ता गरेर सहमति भइहाल्ने विस्वासीलो अवस्था पनि बनिनसकेको छैन ।
विप्लव नेकपाको स्रोत अनुसार, ‘सम्वादका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरुको रिहाइ आफ्नो पार्टीको शर्त भएको बताएकाछन ।’ साथै सरकारले औपचारिक पत्र पठाएपछि छलफलमा बस्ने आधार तयार हुने र एजेण्डाबारे थप कुराकानी हुने बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार वार्ताको टेबलमा बस्दा संसदीय व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह, वैज्ञानिक पुँजीवाद लगायतको विषयमा छलफल हुनुपर्ने नेकपाको अडान छ । सरकारले वार्ता भन्ने, एजेण्डामा खास रुची नदेखाए जस्तो गरेको देखिन्छ ।
केपी ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा वि’ध्वंसात्मक एवं हिं’सात्मक गतिविधिमा लागेको भन्दै २८ फागुन २०७५ मा गतिविधिमाथि प्र’तिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्ध लागेयता नेकपाका एक हजार ९६८ जना नेता, कार्यकर्तालाई प्रहरीले प’क्राउ गरी विभिन्न मु’द्दा चलाएकोछ ।श्रोत : राजनीति